Sunday October 27, 2019 - 17:18:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in howlgal gaar ah oo ka dhacay waqooyiga wadanka Suuriya ay ku dileen Hogaamiyihii kooxda Daacish iyo dagaalyahanno kale.
Shir Jaraa'id oo Trump uu ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka ayuu ku sheegay in weerar ciidamo American ah ay xalay ka fuliyeen tuulo katirsan gobolka Idlib ee waqooyiga Suuriya ay ugu suurtagashay in ay dilaan Abuubakar Al Baqdaadi Hoggaamiyihii Ururka Daacish.
Wuxuu carabaabay in weerarka oo ay ka qeyb qaateen 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah ay dhanka sirdoonka ka gacan siiyeen dowladaha Ruushka iyo Turkiga.
Donald Trump ayaa carrab dhabay in markii ciidamadoodu ku degeen goobtii uu isku qarinayay Abuubakar Baqdaadi ay lakulmeen rasaas xooggan balse iska hor'imaad muddo socday kadib uu Baqdaadi ucararay god goobta la weeraray ku yiillay kadibna uu halkaas isku qarxiyay sida Trump uu ku dooday.
Dowladda Mareykanka waxay ku faantay in ay dishay saraakiil kale oo Hoggaamiyihii Daacish kula sugnaa goobta weerarku ka dhacay, Xukuumadda Washington waxay xaqiijisay in wax khasaara ah aysan ciidamadeeda kasoo gaarin weerarkii ka dhacay Waqooyiga Suuriya balse uu ka dhaawacmay hal Eey oo ay wateen ciidamada weerarka qaaday.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Ururka Daacish oo ku saabsan sheegashada katimid Mareykanka ee ah in ladilay Hoggaamiyihii Ururkooda.
Warbaahinta Mareykanka iyo midda Suuriya ayaa saaka aroortii faafinaysay warka ku saabsan in gobolka Idlib lagu dilay madaxii Ururka Daacish.